आजबाट फिल्म हल खुल्दै!!! - Juneli Daily
गत वर्षको चैत्रदेखि बन्द रहेका फिल्म हलहरू आज (शुक्रबार)बाट खुल्दै छन् । सरकारले हल सञ्चालनमा ल्याउन अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरे पनि हल सञ्चालकहरूको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघले एकतर्फी रूपमा हल खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले सबै क्षेत्र खोलिसकेको र फिल्म हल मात्रै बन्द गर्नुपर्ने कुनै गतिलो कारण देखाउन नसकेका कारण चलचित्रकर्मी हल खोल्ने निर्णयमा संघले जनाएको छ ।
फिल्म रिलिजका लागि अधिकांश हलले आन्तरिक तयारी गरिसकेको संघले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको फिल्म हल खुल्दा पहिले कुन फिल्म रिलिज होला त ? सबैको चासोको विषय अहिले यही रहेको छ । नेपाल चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्मा आजबाट पुरानै फिल्म ‘आमा’ र ‘सेन्टी भाइरस’ लगाउने संघले जनाएको छ ।
दीपेन्द्र के खनालको निर्देशन रहेको फिल्म ‘आमा’मा मिथिला शर्मा, सुरक्षा पन्त, सरिता गिरीलगायतका कलाकारको अभियन छ ।
‘सेन्टिभाइरस’ रामबाबु गुरुङको निर्देशन रहेको फिल्म हो । फिल्ममा सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’, कुन्जना घिमिरे ‘सुन्तली’, दयाहाङ राई, विल्सनविक्रम राई, बुद्धि तामाङ, कमलमणि नेपाल, राजाराम पौडेल, सूर्यमाला खनाल, वसन्त भट्ट, दीपक आचार्यलगायतको अभिनय रहेको छ ।